Orodyahankii ugu da.da weynaa Taariikhda oo ka qayb galay Cayaarihiisii ugu danbeeyey? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Orodyahankii ugu da.da weynaa Taariikhda oo ka qayb galay Cayaarihiisii ugu danbeeyey?
(12-9-2018) Fauja Singh oo lagu tilmaamo orodyahan ka mid ah orodyahanada ugu taariikh weyn muddo badana soo ordayay ayaa ciyaarta orodka kaga fadhiisanaya isaga oo da’diisu kor u dhaaftay 101 sano. Fauja Singh oo ah orodyahan u dhashay wadanka India balse wakhtigan haysta dhalasahda wadanka Ingiriiska ayaan wali ka tanaasulin in uu ordo orodada dhaadheer isaga oo da’dan jooga.
Sida ay ku soo warramayso majaladda caanka ah ee Sports of the week ee ka soo baxda wadanka Ingiriisku Singh ayaa qorshaynaya in uu orodkiisa ku soo gunaanado ku dhawad muddo 82 sanadood ah oo waxaanu qorshaynayaa in uu orodkiisaa mudada dheer qaatay ku so gunaanado orod Maaratoon ah oo dhawaan ka dhici doona jasiiradda Hong Kong dhererkiisuna yahay 10-Kiilo Mitir. Iyaba waa arrin layaab lehe orodyahankan duqa ahi waxa uu muujiyay karti aan looga baran aadamaha kadib mudada intaasi le’eg oo uu ordayay isaga oo aan mar kali ah da’diisu saamayn ku yeelan hannaanka orod ee uu ku soo caano maalay.
Dhawaan ayay ahayd markii xidhiidhka ciyaaraha fudud ee wadanka Ingiriisku abaalmarin heerkeedu sarreeyo ku siiyeen ninkan odayga ah orodada iyo da’da uu ku ordo oo ay wax ka baran karaan shucuubta adduunka ku nooli. Singh ayaa ah nin asalkiisu ka soo jeedo gobolka Bunjab ee dalka Hindiya isaga oo yarna u soo wareegay wadanka Ingiriiska. Wargeyska arrintan wax ka qoray waxa uu xusay in ninkan orodku aanu u ahayn wax uu ku shaqaysto oo xirfad u ah balse uu ahaa nin shaqaale ah oo nolol maalmeedkiisa kala soo baxa warshad wax soo saar oo uu muddo ku dhaw siddeetameeye sano ka soo shaqaynayay balse uu iska jeclaa orodka mar wal oo uu arko cid ordaysana uu dhinaca kaga qaban jiray. Singh waxa uu ka soo qayb galay ku dhawaad laba kun oo orod oo ka dhacay wadanka Ingiriiska iyo dalkiisa hindiya, waxaana lagu xasuustaa orodada Maaratoonka ah ee sannad walba lagu qabto caasimadda wadanka Ingiriiska ee London oo uu ka qab gali jiray jiilal kala dambeeyayna ku caqliyaysteen isaga uu ninkan duqa ahi ka qayb gala.
Mar wargeyska The Daily Telegraph wax ka waydiiyay caafimaadkiisa iyo sida ay ugu suurta gashay in uu da’dan ku soo gaadho isaga oo orodyahan ah waxa uu Fauja Singh ku jawaabay sidan: “Waxa ay ahayd taariikh hore. Aniga oo yar waxaan jeclaa orodka iyo guud ahaan jimicsiga. Waxaan ku soo barbaaray qoys beeralay ah oo subaxdii dadka oo dhammi u yaacaan dhinaca wax soo saarka beeraha. Jidh ahaan waxaan ahaa nin dhuuban oo orodkiisu aad u dheer yahay. Markii aan England soo dagay waxaan caadaystay in aan noqdo nin orda. Ilaa aan soo gaadhayay da’dan marnaba kamaan tanaasulin in aan orodka joojiyo. Dabcan da’da ayaan kuu saamaxayn in aad wax badan orod samayso balse waxaan ahaa nin ku dadaala in aanu joojin orodka si kasta oo awoodaydu isku dhimaysay”.